Ike ọsọ: Mgbanwe Dijitalụ Na-agbanwe Azụmaahịa na Ike Ikike | Martech Zone
Vlocity: Dijitalụ Gbanwee Salesforce na ikike ikike ịrụ ọrụ
Monday, November 18, 2019 Na Mọnde, Nọmba 19, 2019 Douglas Karr
Vlocity bụ ikpo okwu na-eme ka igwe ojii rụọ ọrụ site na mbugharị data gaa na office office Integration, ahịa omnichannel na ọrụ na mkpanaka na nchịkọta. Ọsọ na-enyere aka ịnapụta ogo dị elu, ahụmịhe metụtara ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a:
Mgbasa ozi na Ntụrụndụ
Ike na akụrụngwa
Na ụlọ ọrụ ndị ahụ, na-emekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa nwere ike ịbụ mkpụmkpụ - ma dị anya n'etiti. Ihe omuma ha na nzuko ndi ahu na-achoputa ma ha bu ndi nkwalite, ma obu ndi ozo. Mkparịta ụka ahụ kwesịrị ịbụ nke zuru oke, ziri ezi, ọsọ ọsọ - ma mezue ọwa nke nhọrọ ndị ahịa. Karịsịa, ndị ọrụ gị kwesịrị ijikọ ndị ahịa na a ọkwa onwe - ikwe ka ụdị ihe eji eme gị na-enwu.
na Ngwa ngwa mmekorita dijitalụ nke oso, ndị ọrụ nwere ike ilekwasị anya na ndị ahịa, karịa sọftụwia ahụ. Site na oke akụrụngwa nke ihe eji arụ ọrụ - ihe niile 100% na Salesforce - ọsọ na-agbanwe usoro CRM gị nke ọma ike azụmahịa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ. Na mfe iji eduzi aga, ị ga-enwe ike inokota ngwa, ọsọ ọhụrụ ọrụ ka arụpụtaghị, ma belata gị n'ozuzu na-eri na-eje ozi.
Ngwa ngwa mmekorita dijitalụ nke oso
Ọsọ Omniscript ™ - Nkà ike ahịa mmekọrịta na-enweghị koodu, ma idokwa ọtụtụ ọwa na ngwaọrụ. Duzie ndị ọrụ site na ahịa na usoro ọrụ na ngwa ngwa, azịza nke ahaziri iche, yana njikọta enweghị ntụpọ na ngwa ngwa na data. Site na Vlocity OmniScript ™, ị nweere onwe gị ịmebe mmekọrịta ndị ahịa na - etinye aka - ma gbanwee usoro mmekọrịta ahụ ka ahịa gbanwere. Enweghị koodu dị oke ọnụ iji lekọta - naanị ọkwa azụmaahịa ọhụrụ.
Ngwunye Ọrụ Ahịa ọsọ ọsọ - Mgbe ndị ahịa gị kpọrọ oku, were mee ihe site na njikwa njikwa ngwa ngwa - yana ikike ịmalite ọtụtụ usoro eduzi sitere na ibe. Site na iji ihe eji eme ihe, UI nke dabeere na kaadị, iji anya nke uche hụ ohere ohere, mmekọrịta ngwaahịa na mmekọrịta mmekọrịta esitụbeghị mfe - ọbụlagodi na echekwara data ahụ na mpụga Salesforce. Na mgbakwunye, ya na ndebiri HTML5 na CSS3 ndebiri, ị nwere ike ịke ma tinye otu ọrụ ahụ na ọtụtụ ọwa na ngwaọrụ.
Ike ọsọ DataRaptor ™ - Jikwaa usoro data dị mgbagwoju anya na ntọala nke Salesforce site na iji eserese data na-egosipụta ma weghachite REST. Vlocity DataRaptor ™ na-eme ka njikọta nke data mpụga dị mfe - na-ebudata ngwa ngwa, na-ewepụta ma na-agbanwe usoro nhazi nke usoro JSON dị n'ụdị - niile na-enweghị nzuzo. Njikọ ndị mmadụ dị ugbu a ngwa ngwa iji mejuputa ya, ma dịkwa mfe ijikwa.
Usoro ọsọ ọsọ Engines - Onyinye ahaziri iche dị ugbu a, nyocha ma kwado ọnụọgụ na ego, kwado ngwaahịa - niile dabere na iwu ahaziri mfe. Ohere gbasawanye ohere nke ọrụ azụmaahịa na-agbakwunye ọrụ ụlọ ọrụ miri emi na mmekọrịta ndị ahịa gị - na-ebelata koodu nzuzo, na-eme ka mmezi dị mfe ma na-emewanyewanye ngwa ngwa.
Ọsọ Mobile - Ngwa ngwa ngwa na-elekwasị anya na itinye ozi na mpempe akwụkwọ, ịnyagharịa ma nyefee ụdị ndị ọzọ. Ọsọ Mobile ngwa dị iche iche, dị mfe ma dịkwa mfe iji. Egosipụta oge nke mmekọrịta na akụkọ mere na onye ahịa. Onye ọrụ ahụ nwere ike ilele ngwa ngwa site na usoro iheomume ndị ahịa wee mata ihe mere n'oge na-adịbeghị anya tupu nzukọ ndị ahịa na-esote. Mkpado emelitere iji tinye ozi profaịlụ na ịkpọtụrụ ndị ahịa.
Ọsọ ọsọ - Wearables meghere ụzọ maka oge ndị ọzọ na njem omnichannel - oge nke ahaziri, dị mfe, ma dị mfe. Site n'ọkwá ahaziri iche ka contextually-maara ahịa ohere, Vlocity Wear-enyere gị chepụta na-anapụta mgbanwe ọhụrụ touchpoints maka gị ahịa. Seamlessly jikọọ ndị ahịa data n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla na Vlocity Wear. Nweta mkpebi ọsịsọ, nchekwa ahịa dị nchebe site na ịnweta data dị ndụ, nyochaa atụmatụ, yana ịkekọrịta ozi na ndị ahịa ozugbo na ngwaọrụ ndị nwere ike weara. Mee ka ọrụ gị gabiga azụmahịa gị ma mekwaa usoro azụmaahịa ọgbara ọhụụ iji nwee ike ịnabata mkpebi, zipu ncheta na ndị ọzọ
Nchịkọta ọsọ nke nyocha Clickstream - Na Nchịkọta Ahịa n'elu ikpo okwu, Vlocity na-ejikọ ike nyocha miri emi na ngwa nkwukọrịta anyị iji nyefee nghọta bara uru maka ndị ahịa anyị. Ugbu a ụlọ ọrụ nwere ike ịgbatị oge iji jiri amamịghe, ngwa ọrụ igwe ojii akọwapụtara nke ọma site na teknụzụ Salesforce Wave. Ọ bụghị naanị nnukwu data, ọ bụ data kachasị mma.
Rịọ ọsọ ọsọ
Tags: nchịkọta nhọrọonye nyochawdgMediaọsọngwa ngwa mobileoke ije oso
Nchịkọta Mgbasa Ahịa Influencer
Zọ dị irè iji bipụta ngwa gam akporo na Playlọ Ahịa Google Play